Fact Check: ရင်ခေါင်းအထူးကုဒေါက်တာအောင်သက်ဇော်ကွယ်လွန်ဆိုတဲ့ သတင်းတုတစ်ကျော့ပြန်ပျံ့နှံ့ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
စဉ့်ကိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကို Volunteer လာတဲ့ အဆုတ်နဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သက် ဇော်ကွယ်လွန်မှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းလို့ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှု ကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ပို့စ်မှာ “ #အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းနှင့်အတူလေးစားဂုဏ်ပြုလျက်ပါ . ဒေါက်တာအောင်သက် ဇော် (၃၇)နှစ် စဉ့်ကိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကို Volunteer လာတဲ့ အဆုတ်နဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် မန္တလေး မှ ရန်ကုန်သို့ Volunteer အဖြစ်သွားရောက်ကူညီတဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ကွယ်လွန်…။ ( ၁၆ . ၁၁. ၂၀၂၀ ) ၊ ရန်ကုန် တိုင်းပြည်အတွက် . . . ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါ။ ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ။”(မူရင်းအရေးအသားအတိုင်း)လို့ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီပို့စ်ဟာ သတင်းတုသတင်းမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ပထမပတ်ကလည်းပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးတာတွေ့ရပြီး Crescendo Myanmar ကတွေ့ ရှိရပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေအကြားပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ တူညီစွာ ရေးသားမျှဝေမှုနဲ့ပို့စ်တွေကို ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆေးပညာဌာန တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဦးက မန္တလေးမှာ ဒေါက်တာ အောင်သက်ဇော်အမည်နဲ့ သမားတော် သို့မဟုတ် ခွဲစိပ်အထူးကုမရှိကြောင်းနဲ့ သတင်းတုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတဆင့်ရှင်းလင်းခဲ့ဖူးတာအောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – Maung Maung Oo | Archive link
အဲဒီအချိန်က ဒီလိုပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြမ်းသတင်းဌာနက အချက်အလက်စိစစ်ခဲ့ဖူးတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပို့စ်တစ်ုခကို တင်ခဲ့သူကလည်း သတင်းမှားတင်မိတာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလင့်ခ်မှာဝင်ရောက်လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်အရ အဆုတ်နဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သက်ဇော်ကွယ်လွန် ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဟာ သတင်းတုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
October 30, 2020 October 30, 2020 Lynn Yu
March 13, 2020 March 30, 2021 နေရာမောင်